Home Wararka Dowlada Federaalka oo lagu eedeeyay in ay khafaalatay shaqaale Caafimaad
Dowlada Somaliland ayaa ku eedeeyaysan Dowlada Federaalka in ay khaqaalatay shaqaale Caafimaad. Laba ka mida shaqaalaha Isbitaalka Dr Adna Aadan oo ka ambabaxay Hargeysa kuna sii jeeday Kenya ayaa waxaa laga qabtay garoonka diyaaradaha Muqdisho oo ay Transit ku ahaayeen.
Shaqaalahaan ayaa la sheegay in ay ku xayirnaayeen Muqdisho muddo 3 maalmood ah. Sadax maalin ka dib waxaa dib loogu celiyey Somaliland, baasaboorkoodii Somaliland waa jeexjeexay, sida ay sheegeen illo wareedyo kala duwan. Dowlada federaalka ah ee Soomaaliya ayaan wali ka hadlin dhacdadan. Maamulka garoonka Aadan Cadde wuxuu diidey in uu tafaasiil guud ka bixiyo sababta iyo qaabka ay u dhacdey arrintaan.
Dr Adna Aadan, oo ah maamulaha guud ee Isbitaalka Dr Adna oo la hadashay warbaahinta ayaa si xoogan u cambaareysay falkan, waxaana ay ku tilmaamtay “fal baalmarsan shuruucda dunida”. D.R Adna Aadan ayaa sheegtay in falka shaqaalaheeda lagula kacay uu yahay sharci daro.
“Maalin walba waxaa madaarka Hargeysa Transit ku mara dad badan oo wata baasaboorka Soomaalyia, waxba lama yeelo si xushmad leh ayaa loola dhaqmaa, safarkoodana ay u sii wataan, waa nasiib daro dhibaatada loo geystay shaqaalaheena oo aan u socon Muqdisho, balse ku aha transit oo kaliya,” ayay hadalkeeda ku dartay Dr. Adna Aadan Ismaaciil.